Nampisokatra Ny Mason’ny Peroviana Manoloana ny Fahafatesan’ireo Zanaky ny Fireneny Ilay Zazalahy Syriana Maty An-drano · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Septambra 2015 7:43 GMT
Vakio amin'ny teny English, Português, Deutsch, русский, Español
Ankizy avy ao amin'ny vondrom-piarahamonina Uro ao Puno, renirano Titicaca, Però. Photo Sary avy amin'i Jay Joslin tao amin'ny Flickr. CC 2.0.
Lahatsoratra nosoratan'i Juan Arellano nivoaka voalohany tao amin'ny Globalizad.
Nanakoako manerantany, toy ny tao Però ny sarin'i Alan Kurdi, ankizy Syriana maty an-drano natsipin'ny ranomasina tao Torkia, izay nozaraina manerana ny media sosialy ny sariny. Ity lazaina fa “fampiratiana tafahoatra” ity no nitarika ny habaka Peroviana mpanesoeso ho namoaka lahatsoratra mamazivazy ireo olona nifindra toerana noho ny loza iainan'ny olona ao amin'ny firenen-kafa. Samy nanana ny heviny ny mpiserasera tamin'ity zavatra mampihomehy ity, maro ireo nitsikera ny esoeso ho tsy mahalala ny fijaliana ao anatin'ny krizin'ny mpitsoa-ponenana ao Eoropa sy ireo loza hafa manerantany.
Famoahana sarin'ankizy mangatsiaka saingy tsy misy olona miraharaha satria avy ao Puno izy ireo
Ankizy ao Huancavelica, Puno sy Amazonia […] Nalaina tao anatin'ny toe-javatra ratsy indrindra ny sary ary nalefa tao amin'ny media isan-karazany, ho an'ny bilaogera malaza sy adala hafa tao amin'ny aterineto izany. Saingy tsy nisy olona namoaka azy ireo, na dia ao anatin'ny rindrin'ny Facebook aza, ka tsy nahazo “Tiako” na dia iray aza izy ireo ka tsy afa-po amin'izany ary lazaina ho manana tsy fahafaham-po ara-tsosialy.
“Nilaza izy ireo fa sosialista, manohitra ny fandrosoana, manohitra ny demaokrasia izahay, ary anisan'ireo mpampihorohoro ny ray aman-dreninay. Inona ihany koa, nilaza izy ireo fa ny antso ho an'ny fanampiana ataonay dia mety hanimba ny fampiasam-bola ka tsy tokony hitaraina izahay satria mety hahatezitra ireo mpandraharaha izany,” araka ny filazan'ny iray amin'ireo ankizy mangatsiaka ho faty ao Mazocruz, Puno.
Ny lafiny iray mampalahelo amin'ilay esoeso dia ny hatsiaka henjana namely an'i Andes sy ny faritra Amazona Peroviana, amin'ny mari-pàna farany ambany mahatratra 20 degre ambanin'ny zero Celsius. Tamin'ny herinandro voalohany volana Aogositra, efa namoizana olona 129 (ankizy sy beantitra ny ankamaroany) ny rivotra mangatsiaka.
Mpanao gazety Raúl Castro naneho hevitra tao amin'ny lahatsoratra fanehoan-kevitra fa mandalo ao an-drenivohitra Peroviana isan-taona amin'ny fotoana tahaka izany ity karazam-baovao ity, ary tsy raharahiana tahaka izany ihany koa: “ho an'ny mponin'i Lima […], toa lavitra toy ny famonoana ireo olom-pirenena namany Quechua sy Asháninka nandritra ny fihanaky ny fampihorohoroana [tamin'ny fiandohan'ny taona 1980] ny olana. Raha Quechua na Aymara izy ireo, dia tsy misy ny fahatsapana fa mizaka zom-pirenena mitovy amin-dry zareo ao Lima izy ireo. Raha avy ao Lamas na Huitotos ary midina ao amin'ny faritra mitoka-monina ao Amazonia ny hatsika tafahoatra, dia lazaina Però hafa izany—fa tsy ahy.”
Sioka maro no naneho ny hevitra fa mampiseho ny tsy firaharahiana ankapobeny sy fanaovana zanak'ikalahafa ara-maoraly ny toe-javatra.
Fampatsiahivina fotsiny: ankizy 200 no maty isan-taona noho ny hatsiaka ao Puno. Tsy mila mankany Syria ianao ho fanehoana ny fanohananao
Mety hoe lohahevitra malaza ao Però ny Alan Kurdi. Manontany tena aho raha indray andro any, ho lasa lohahevitra malaza ao Però ny fahafatesan'ireo ankizy an-jatony tamin'ny hatsiaka
Manaiky ireo mpitsoa-ponenana Syriana ao Però? Tena Marina? Ary manoloana ireo ankizy mila ho fatin'ny hatsiaka, miasa sady tsy manan-kohanina?
Isabel Guerra, mpanao gazety sady mpikambana ato amin'ny Global Voices nandinika ny raharaha, saingy amin'ny fijery hafa:
Amin'izao fotoana ahitako ireo Eoropeana maro maniry hanokatra ny firenen'izy ireo ho an'ny Syriana nafindra toerana, tsy haiko ny tsy hanontany ny antony tsy nanaovan'izy ireo tahaka izany ho an'ny Peroviana tamin'ny 1980 sy 1990, izay nandositra ny firenena anaty fampihorohoroana ary nitady toerana tsy ahafaty an'izy ireo amin'ny Lalambe Mamirapiratra na ny Hetsika Revolisionera Túpac Amaru na ny Grupo Colina, na fisondrotam-bidin-javatra tafahoatra, na ny tsy fananan'asa sy ny hanoanana. Variana amin'ny visa Schengen an'i Eoropa isika, izay zanatanin'ny firenena Eoropeana ary miray kolontsaina amin'ny Espaniola mba hanakanana antsika tsy hiditra ao aminy, nilaza tamintsika izy ireo fa hivelona amin'ny mahasoa azy ireo sy hangalatra ny asan'izy ireo isika. Ary heverin'izy ireo amin'ny fomba manaratsy fa toy ny SUDACAS isika…
Namorona sary natao hampihomehezana mitovy amin'ny sary orizinalin'i Alan miaraka amin'ny manjò ireo olona indizeny ao Però ihany koa i Isabel, milaza fa mahafaty ireo raharaha tsy raharahiana ireo.
Tsy mendrika ho faty an-drano i Alan. Tsy mendrika ho matin'ny hatsiaka ny zanatsika. Goavana ny filàna. Jereo ny manodidina
Tsy hoe tsy misy ny zava-bita mba hanampiana ireo ankizy ao Puno sy ireo niharam-boina hafa tamin'ny hatsiaka; fa betsaka no tokony mbola atao. Indrisy, mizàka ny toe-draharaha henjana dia henjana amin'ny fanohanana kely avy amin'ny fanjakana ny fiarahamonina ao amin'ny faritra avon'ny tangorombohitra Andes, na dia teo aza ny fikasana tsara teo amin'ny mpiasam-panjakana maro.
Nanambara ny fahatongavan'ireo manam-pahaizana ara-pitsaboana maromaro mba hanampy hiadiana amin'ny hatsiaka ny Minisitry ny Fahasalamana Velasquez
Mila ny fanampiantsika ireo rahalahintsika ao Puno. Afaka miady amin'ny hatsiaka isika amin'ny alalan'ny fanomezana fitafiana sy bodofotsy mafana
Nahazo vahana ny ezaka fanampiana, nikarakara hetsika madinika saingy manome aingam-panahy ireo mpikatroka, tahaka ny vondrona mpianatra ao amin'ny Colegio Ricardo Bentín any Lima, izay nanampy nanome fehiloha tany amin'izy ireo ho an'ny fiarahamonina tao amin'ny faritra Ayacucho, niaraka tamin'ny fanampian'ny mpampianatr'izy ireo. Nitarika hetsika nahazo famatsiam-bola tsara ihany koa ny Universidad Esan mba hamonjena ny toe-draharaha ao Puno. Ny hafa tahaka ny @JuntosPorElPeru ihany koa dia niasa tamin'ny sehatra iraisampirenena:
Bodofotsy sy fitafiana alefa ao Av Arequipa 3570 sy eo akaikin'ny lapan'ny tanàna.
Mazava ho azy fa maro ny tokony atao. Raha mbola tsy nanatevin-daharana ny hetsika ny sasany, ny hafa kosa mbola tsy miraharaha ny toe-javatra, mangatsiaka mila ho faty ny ankizy ao Andes.
Ankizy 15 no namoy ny ainy tao anatin'ny hatsiaka Peroviana. Niteraka aretina ara-pisefoana sy pnemonia (aretin-tratra) ny mari-pàna tafahoatra tao amin'ny faritra atsimon'ny firenena